Mukuru weAnglican VaRowan Williams Votarisirwa muZimbabwe neSvondo
Gumiguru 07, 2011
VaWilliams avo vachapinda muMozambique, Zimbabwe neZambia mushure mekubva kumhemberero dziri kuitwa kuMalawi, vari kutarisirwa kuita hurukuro nemutungamiriri wenyika VaRobert Mugabe neMuvhuro
Mukuru wesvondo yeAnglican Archbishop VaRowan Williams vari kutarisirwa kusvika muZimbabwe nesvondo vachibva kuMalawi uko vari kupemberera makore zana nemakumi mashanu kubva svondo yeAnglican yatangwa kuBritain.
VaWilliams avo vachapinda muMozambique, Zimbabwe neZambia mushure mekubva kumhemberero dziri kuitwa kuMalawi, vari kutarisirwa kuita hurukuro nemutungamiriri wenyika President Robert Mugabe neMuvhuro asi havasati vapindurwa pari zvino.
VaWilliams vachapinza misa huru yevatenderi veAnglican vari pasi paVaChad Gandiya veChurch of the Province of Central Africa neSvondo kuCity Sports Centre vachibatsirana nevamwe vakuru vechitendero ichi vari kubva munyika dzakatenderedza Zimbabwe.
VaGandiya vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvose zvagadziriswa kumirira kusvika kwaVaWilliams.
Mutauriri waVaKunonga Bishop Alfred Munyanyi vati ivo havana kukokwa kumusangano uyu.
Vatizve ivo havaneyi nawo nekuti zviri kutaurwa ndezvehungochani. VaKunonga ndivo vakapihwa simba nematare ekutonga zvivakwa zvechechi yeAnglican muDiocese reHarare pari zvino kusvika nyaya yacho yapera mumatare.
Hurukuro naVa Chad Nicholas Gandiya